Ergeyga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo soo dhoweeyay wajiga labaad ee shirka Cadaado | Awdalnation.com
Ergeyga Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo soo dhoweeyay wajiga labaad ee shirka Cadaado
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa soo dhoweeyay furitaanka wajiga labaad ee shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe ee Soomaaliya.
Mr Kay Kay ayaa soo dhoweeyay sida waxtarka leh ee dadka gobollada dhexe ay uga qayb galeen geedi-socodka, wuxuuna dadkaas ku amaanay sida ay uga go’antahay inay qaddariyaan nidaamka lagu gaarayo nabad iyo xasillooni.
“Waxaan rajeynayaa in dadaalka iyo go’aanka ay wada gaareen dhamaan wufuudda – ka qeybgeleysa shirka – ay u suurto gelin doonto shirka Cadaado inuu ku dhamaado guul. Waxaan ku guubaabinayaa dadka gobollada dhexe inay dhistaan maamulkooda cusub ayagoo ixtiraamaayo mabaadi’da dib-u-heshiisiinta, isu-tanaasulka iyo u-wada-dhamaanshaha hawsha. Gaar ahaan waa in haweenka, dhalinyarada iyo dadka laga tirada badanyahay ay ka qayb-qaataan shirka” ayuu yiri Mudane Kay.
Heshiiska khuseeyo gobollada dhexe waxaa lagu saxiixay Muqdisho 30-ki July 2014, halkaasoo dhamaan dhinacyadii arrintu khuseysay ku wada go’aansadeen inay wada sameystaan maamul loo wada dhanyahay.
Wixii ka dambeeyay taariikhdaas, dadka gobollada dhexe waxay u hawlgaleen sidi lagu heli lahaa dib-u-heshiisiin iyo geedi-socod siyaasadeed oo lagu dhisaayo maamul kumeelgaar ah.